Top 10 Best Zoro Ezo ese foto maka Nyochaa nwa agbọghọ / Enyemaka Obodo - OMG Solutions
Kachasị igwefoto zoro ezo SPY kachasị mma nke SPY maka Monitor Maid / Onye Inyeaka Obodo
N'ihi usoro ịbawanye ụba nke Maids na ndị na-enyere aka n'ụlọ n'ụlọ anyị. Anyị ahụtala okwu dịka ụmụ nwanyị na-emetọ ụmụaka, na-enye ha nri na-adịghị mma, gụnyere izu ohi na ndị ọzọ. N'ihi ya, mkpa maka sistemụ maka CCTV ebe obibi na azụmaahịa dị elu karịa mgbe ọ bụla. Ọ dị mkpa ka anyị na-enwe ụfọdụ akwụkwọ ndenye ego na edozi. N'etiti ọtụtụ uzo ozo, uzo ozo kacha mma bu inwe igwefoto CCTV n'ụlọ anyi. Agbanyeghị, ajụjụ a na-ebilite gbasara ụdị igwefoto CCTV kachasị mma maka gị ka ị na-atụle ihe dịka mmefu ego, atụmatụ, yana ịdị mfe nke iji.
OMG Super Night ọhụụ WIFI USB Charger Camera (SPY306)
Site na mgbanwe nke Oge A, onye ọ bụla chọrọ inwe ụzọ kachasị mma iji mee ihe banyere ọnọdụ. Oleekwa ihe ọzọ nwere ike ịkarị ike karịa igwefoto maka nchekwa gị maka nha chaja nke ị nwere ike iji ọbụlagodi n'abalị na -echekarị ohere enweghị nchekasị? Ee, igwefoto SPY306 na-abia ma nwee ezigbo ọfụma yana ọmarịcha interface. Nhazi ya na -eme ka ọ dị mkpa maka ụfọdụ gburugburu ma mee ka ọ ghara ịchọpụta n'otu oge. Ihe ọzọ bụ? Ọ ọbụna nwere super abalị ọhụụ mode! Iji jide n'aka na ị na-ehi ụra na udo zuru oke !. Enwere ike ịgbagha ya na chaja USB nkịtị ọ bụla nke anyị na-eji maka ekwentị anyị, yabụ ị nwere ike iji ya oge ọ bụla, ebe ọ bụla.
Igwefoto elekere igwefoto OMG (WIFI)SPY297)
Kedu ihe igwefoto nchekwa maka ma ọ bụrụ na enweghị ike ịgbakọta na gburugburu ya? Ọ nwere ike iweta ọkwa nwute ma ọ bụrụ na onye ahụ nke batara ma ọ bụ onye nwere ebumnuche nke imejọ ihe gị ma ọ bụ ụmụaka achọpụtaghị ebe ọ dị. N'ebe ndị dị otú a, SPY297 na-arụ ọrụ ya. O nwere nha nke igwe okwu redio na-eme ka ọ bụrụ nke na-enweghị ike ịchọpụta. Ọ na-arụ ọrụ ma na-ejikwa ya site na sistemụ WIFI na-eme ka ọ na-arụ ọrụ ma na-ejide data gị niile, ọ bụghị naanị nke ahụ kamakwa ọ na-edobe vidiyo ndị ọ dekọtara na ụbọchị na oge e mepụtara ha ma ọ bụ dekọ. Ọ na-abịa yana njiri ntụrụndụ dị egwu ị nwere ike iji mee ka obi dị gị ụtọ ugbu a na ị nwere nchekwa zuru oke dịka Bluetooth: ị nwere ike ịkpọ egwu na ya wee debe ike ọgwụgwụ gị, ma nwee redio na-ebugharị: yabụ ịnwere ike igwu ọdụ dị iche iche na ọ bụla ntụpọ ma debe ememe ahụ ka ọ chaa ọkụ !. N'okwu dị mkpirikpi, nke a bụ ngwugwu ntụrụndụ yana nchekwa na mma ya !.
Igwefoto Router Outer 4K WIFI (SPY296)
Wifi juru ebe niile n’ụlọ niile n’ụbọchị ndị a, ọ bụ otu n’ime ihe ọgụgụ isi ndị ahụ bụ otu akụkụ dị mkpa ebe ọ bụla ọ bụrụ na ọ bi, ọfịs, ma ọ bụ ebe ọ bụla na-adịru nwa oge. Agbanyeghị, ị maara na ọbụlagodi WIFI dị nfe nwere ike inye gị nchekwa dịka onweghị nke ọzọ? Nke ahụ ziri ezi, ya na SPY296. Nwere ike ịnụ ụtọ WIFI na-enweghị nhịahụ mgbe ị na-enwekwa ahụ iru ala n'otu oge ahụ na ịmakwa gburugburu gị niile. Ọ nwere ike dekọba vidiyo ruo mkpebi 4K maka inye gị ihu dị oke mkpa ị ga - ejide n'aka na ihe niile dị n'okpuru aka gị ma zigakwa n'anya onye ọ bụla. Enwere ike ịchịkwa ya site na ngwaọrụ gam akporo yana smartphone nke IOS nke mere na-ahapụ ya ka ọ dịrị onye ọ bụla nkịtị mfe ịchọpụta ya. O nwekwara oghere kaadi SD maka mgbakwunye ozo nke enwere ike ịgbatị ruo 128 Gb na-ejide n'aka na ị ezughi oke iji merie ụdị data ịchọrọ ka ịdekọ ya. Ihe okike ya wifi router router na-eme ka ọ bụrụ ihe na-enweghị ike ịchọpụta. Naanị tinye ya na ebe ọ bụla nke ụlọ gị, ọfịs gị, ma ọ bụ ebe ọha na-aga ma nwee nkọwa zuru ezu na oge niile n'emeghị mgbalị ọ bụla!
OMG WIFI Bluetooth SPY SPY Hidden Camera (SPY263)
Egwú bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ onye ọ bụla ugbu a. Ndị mmadụ na-ege ya ntị mgbe ha na-arụ ọrụ, mgbe ike gwụrụ ha n'ụlọ, n'oge pụrụ iche na ihe omume. Egwu na ikuku n’ebe nile n’oge Ela dị ugbu a. It bụrụ ndị ntorobịa ma ọ bụ ndị agadi, mmadụ ọ bụla nwere nhọrọ maka ya. Maka ndị na-egwu egwu, akpọbatala ndị na-ekwu okwu Bluetooth n’oge ma nọrọ n’ahịa ọrịre ugbu a ebe ị nwere ike iji ha n’ebe ọ bụla n’oge ọ bụla site na ijikọ site na ekwentị gị ma ọ bụ na laptọọpụ iji kpọọ egwu kachasị amasị gị. Ọ bụ ezie na n'otu oge ahụ, enwere ike iji ihe dị ka nke a mee ihe n'ụzọ zuru oke maka ebumnuche nchekwa yana nke ahụ bụ mgbe SPY263 mere ntinye ya. Ọ bụ igwe egwu Bluetooth ejikọtara nke enwere ike iji ya dị ka igwefoto nche n'otu oge ebe anaghị ekewa otu sekọnd maka ịme onwe gị obi ụtọ. Ọ nwere ike ịdekọ ruo vidiyo mkpebi 4k na-ejide n'aka na ị nwere oke mma maka ndekọ gị, yana inye gị ahụmịhe egwu kachasị ịtụnanya na egwu Doblas Atmos gbara ya gburugburu. Nke a bụ otu ụzọ echekwabara onwe gị, ndị ezin’ụlọ gị ma ọ bụ ndị ọrụ ọfịs.
Wifi, dika m kwuru na mbụ, abụrụla akụkụ nke ndụ kwa ụbọchị na ndụ mmadụ taa, enwere ike iji ya maka nchekwa dị mkpa n'otu oge ahụ. Ọ bụ ezie na SPY204 na-ewere ya na ọkwa ọzọ na igwefoto Cylinder Security WIFI igwefoto a na-atụgharị atụgharị na-abịa na njiri mara oke atụmatụ! Ka anyị buru ụzọ kwuo banyere igwefoto ya nke bụ igwefoto ndekọ 1080p na-agbagharị nke na-enye onye ọrụ ohere itinye nke a n'ebe ọ bụla ọchọrọ ma nweta echiche 360 niile na-enweghị nchekasị ọ bụla. Ọ na batrị 5000mah nke buru nnukwu ibu maka igwefoto n'ezie na-enye ya ogologo oge ka ọ nọ n'ọrụ karịa igwefoto nkịtị. Ọ na-abịa na njiri mara mma maka ikwe ka ị nweta ozi ndị ọzọ gbasara gburugburu gị dịka igwe ọkụ ọkụ ma ọ bụ ngwa iru mmiri nke etinyere n’ime ya. Na nkenke, igwefoto a dị ka igwe na-efegharị efegharị. You nwere ike ọbụna ilele vidiyo ya ka ọ na-ebi ndụ dị ka o nwere ike iyi ruo ọtụtụ awa na awa na-enweghị oge ezumike ọ bụla n'ihi ogo batrị ya., Ọ bụ kọmpat maka ojiji abụọ ahụ na ntụpọ ọ bụla ọ na-azụmaahịa, ọfịs, ma ọ bụ ụlọ !.
Igwefoja chaja OMG (SPY165)
Site na mkparịta ụka niile gbasara nchekwa site na WiFi na ngwaahịa ahụ. Anyi emeela ka o doo anya na otu ị ga - esi nwee nchekwa onwe gị ọbụlagodi iji WIFI dịka ị na - eme na nkịtị, mana ọ bụrụ na agwara m gị na e nwere ụzọ nzuzo karịa nke ị ga - esi na - elekwasị onye ọ bụla anya. ị chọrọ n'ime ụlọ ahụ ma ọ bụ ebe ọ bụla ịchọrọ? Nke a mere SPY165 ama ama nke ọma, karịa nchekwa gị WI-FI ọ na-ejide chaja ya inye gị obere ihu ahụ mgbe ị na-ahụ gburugburu ebe ị nọ. Ọ nwere ike ịdekọ na ntọala dị iche iche dị ka 1080p, 640p ma ọ bụ ọbụna 240p dị ka ọchịchọ onye ahụ, ọ bụghị naanị nke ahụ mana ọ nwekwara ike ịrụ ọrụ ya dị ka chaja chaja nke ọma rụọ ọrụ nke ọma na-ejighi otu ida WIFI. , na-emesi ịdị mma nke vidiyo gị na WIFI na ọkwa nchebe abụọ ka na-abụ onye nzuzu dị ịtụnanya! Nke a bụ nhọrọ dị mma maka ịnweta akụkụ ya na etiti iji nwee ntakịrị ihe ilele anya karịa ka ị na-anụ ụtọ ihe ị na-eme kwa ụbọchị n'otu oge ahụ.
OMG Zidden Spy Book Camera (SPY004)
Ọ bụrụ na ị bụ onye a na-ejigide ọtụtụ faịlụ n’ebe niile n’ọfịs ya, ma ọ bụ na ị na-arụ ọrụ n’ọbá akwụkwọ ebe ịchọrọ iji jide n’aka na nchekwa na-enweghị ndị mmadụ iwe iwe maka ihe nzuzo ha karịa ka SPY004 bụ naanị ihe ịchọrọ . Ugbu a ị ga-echerịrị ihe pụrụ iche gbasara igwefoto a na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche na nke enweghị ike ịchọpụta? Ọ bụ atụmatụ ya zuru oke na ịhe ọ bụla zuru oke nke na-eme ka ọ nwee ike ịnwe akwụkwọ ọ bụla na ebe ọ bụla, ebe na-enyekwa gị nlele nke akụkụ ọ bụla site n'akụkụ ọ bụla na-enweghị mgbakasị azụmahịa gị ma ọ bụ ọfịs na-abanye n'ime mkparịta ụka nzuzo. . Ọ na-abịa na batrị 10,000 mah nke nwere ike bụrụ nke kachasị ike n'etiti ngwaọrụ niile anyị kwuru n'elu, na-enye gị oge ka ịdekọ ma mee ka igwefoto nọ n'ọrụ iji mee ka gburugburu gị dịkwuo mma ma ka mma, mana nke ahụ abụghị ihe niile dị ala ala. Ngwa gaa ebe a. Ọ na - esonyere ya na teknụzụ ọhụụ na - enweghị ìhè nke abalị na - emesi ike kachasị mma nke vidiyo ọbụlagodi mgbe igwefoto na - arụ ọrụ n'abalị !, ọtụtụ ọrụ maka iji dịgasị iche iche, kaadị SD kwadoro ruo 128 GB na ndekọ loop mode maka ụfọdụ ezigbo ngwa ngwa ọkụ. enweghị stutter! Nke a bụ ihe niile ị nwere ike ịrịọ maka nchekwa gị mgbe ọ na - abịa ijikwa ya !.
Nsogbu ike abụrụla esemokwu na Pakistan na ọtụtụ steeti ndị ọzọ na nso nso a ebe ọ bụ na oke ọkụ eletrik na-adịkarị karịa nke ugbu a, na oge ndị dị otú ahụ mobiles yana laptops abụrụla ihe siri ike ịchịkwa ka sistemụ gam akporo na-egwu mmiri dị ka mmiri. . Tho n'ụdị ndị a, ndị mmadụ na-akpọkarị Powerbanks maka idobe ekwentị ha ọbụlagodi ebe enweghị ike gburugburu ma ọ bụ ebe eletrik eletrik. Ha dị oke mkpa ma gbakwunyere ị ga-eburu ha ebe ọ bụla gburugburu iji mee ka ekwentị gị dị ndụ ma ghara ileghara ozi email ma ọ bụ oku ọ bụla dị mkpa. Ma, ọ bụrụ na ịnwere ike Powerbanks ka ọ bụrụ ebe nchekwa nke nchekwa gị? SPY175 pụtara pụta ìhè ebe a maka nke ahụ. Enweela igwefoto mkpebi HD 4k dị na ya nke na-emesi obi ike nke ogo n'otu oge na anaghị enye gị nsogbu n'ọrụ gị! Ọ bụ ihe zuru oke nke nwere ike ịmekọrịta na gburugburu gị nke ọma yana enweghị ime ka ndị mmadụ mara ihe ọ bụ n'ezie. O zuru oke maka iyi egwu Maids na etu ha si emegbu ụmụaka gị ụbọchị ndị a. Naanị kpoo ya ma hapụ ya ka ọ na - chajị ka ọ ga - elekwasị gị anya ka ị na - eme ihe aka gị n'ụlọ ọ bụla nke ụlọ ahụ! Enweela ụfọdụ ihe ịtụnanya dị n’ime ya dịka igwefoto njide na-emegharị iji chọpụta ihe egwu ọ bụla mgbe ọ na-awagharị ebe ị tinyere nke a, nlere ọhụụ abalị dị ịtụnanya ịhapụ ime ka ihe na-enwu ọbụlagodi n’oge ọ nweghị ìhè n’èzí, n’agbanyeghi ihe niile ahụ enweghị ike ịrụ ọrụ ọ gwụla ma ọ bụ maka ezigbo batrị ka obere CCTV a na-abịa na batrị 10,000 mah zuru oke ma nwee ikike iji dobe onye ọ bụla n'okpuru anya igwefoto ya oge niile !.
OMG Mini Wireless WIFI Spy Camera Hidden Pinhole Camera (SPY032)
Mgbe ị na-ekwu maka nchekwa na igwefoto, yana maka otu ị ga - esi wepụ ha n'anya ndị mmadụ iji jide n'aka na ihe ọ bụla ka na - ezo, ha anaghị achọpụta n'ezie ihe na - eme ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na - ele ha anya, anyị enweghị ike ichefu banyere ya. pinhole igwefoto anyị nwere ike!? Otu ụdị kamera ị nwere ike inwe n'akụkụ ọ bụla nke uwe gị, jeans, ahụ gị na jet ọ bụla agaghị enwe ike ịchọta ya. Obere onye uwe ojii a dị na akwa gị nwere ike juputa ya na batrị zuru ezu iji mee ka ọ na-arụ ọrụ ma na-edekọ ihe karịrị awa 70 ogologo oge! Ọ bụ nzuzu otu obere ihe dị otú a ga-esi kọkọta nnukwu ike, mana nke ahụ abụghị ihe ihe Lil a nwere. Ọ na-abịa na igwefoto na-achọpụta ihe ngagharị nke 1080p nke na-ahụ na a na-ahụ ihe ọ bụla na-eme na gburugburu ya ma dekọọ ya nke ọma iji jide n'aka na akụkụ ọ bụla na-adịgide n'okpuru njikwa gị mgbe ị na-eyi ya gburugburu, ọ na-eyi uwe na-eme ka ọ ghara ịhụ anya n'ụzọ nkịtị. nye onye obula inwere ya n’ihu nke n’eme ka ị baa uru na nchedo umuaka gi, ndi ezinulo gi, ma obu ndi n’enwe ndi oru ma choo ndi mmadu na acho imebi ihe gi, umu aka ma obu gi onwe gi. WIFI na-achịkwa ya nke na-eme ka interface ya na ntọala ya ọtụtụ oge tupu ijikwa ya ọbụladị mgbe ị na-anọghị ya. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ile anya mara mma ebe a na - achọpụtakwa na ihe niile dị n'okpuru anya gị, nke a bụ naanị ihe maka gị!
OMG WIFI Network Bluetooth Camera Camera (SPY208)
SPY208 na-enye gị nhọrọ ọzọ ị ga - eji mee onwe gị obi ụtọ mgbe ị na - ejidekwa na ọ nweghị onye na - anwa anwa imegharị enyo gị na gburugburu gị na gburugburu gị imerụ onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla, ebe ọ bụ na ọmarịcha ụkpụrụ adịghị ekwe ka ọ banye n'anya onye ọ bụla. Ee, nke ahụ ziri ezi, SPY208 bụ igwefoto wifi jikọọ nke ya na igwe okwu Bluetooth na - eme ka o nwee obi ike na ntụrụndụ, ebe nchekwa abụọ nọ na oke aka ya. Can nwere ike itinye ya ebe ọ bụla n'ụzọ nkịtị ma ọ bụ nye ya ụmụaka gị ka ha na-egwu egwu ijide n'aka na ị nwere anya na ha ga-eme ka ihe niile ghara ịdị na -eme ka obi sie ha ike mgbe niile. Ọ na - abịa na igwefoto na - eme ndekọ HD nke na - ejide n'aka na ọ gaghị agbaji pikselụ ọ bụla ma na - emesi obi ike imebi ebumnuche ndị na - eche na ha nwere ike iji nwayọ ma ọ bụ omume ọjọọ ọ bụla tinye ihe gị. Ihe a kwadoro kaadị SD ruo 128 GB maka ijide n’aka na ị nwere naanị nchekwa achọrọ maka ịnụ ụtọ ma egwu gị yana vidiyo ị na-eji kamera gị. Ọ bụ otu ụzọ dị ịtụnanya ikpuchi akụkụ niile ọ bụla n'agbanyeghị na ị nweghị akpachapụ anya n'ihi na nwa ọjọọ a ga-echekwa ihe niile n'okpuru anya igwefoto maka gị!
Nzuzo 7334 4 Echiche Taa